Budata VideoCacheView maka Windows
Free Budata maka Windows (0.10 MB)
Ọtụtụ ihe dị na ibe ndị ị gara mgbe ị na-achọgharị ịntanetị na-echekwa na kọmputa gị ruo nwa oge. Ebumnuche nke a bụ iji hụ na usoro nlele na-eme ngwa ngwa na ịgagharị na saịtị ndị a gara.
Mmemme VideoCacheView na-achọtakwa vidiyo netiti faịlụ echekwara ma na-enye gị ohere ikiri vidiyo ndị a na-anọghị nịntanetị. Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ị nwere ike na-adịgide adịgide na-azọpụta videos achọpụtara site mmemme na-ekiri ma emechaa.
Ị nwekwara ike iji mmemme VideoCacheView maka vidiyo ndị dabeere na flash (.flv), ọnụego ya abawanyela ngwa ngwa nafọ ndị na-adịbeghị anya. Agbanyeghị, iji lelee vidiyo dabere na flash ị hụrụ na VideoCacheView, ị ga-eji mmemme ọkpụkpọ vidiyo na-akwado ndọtị .flv.
Ojiji nke mmemme VideoCacheView:
Wụnye faịlụ nrụnye ebudatara. Usoro ihe omume ga-iṅomi cache faịlụ kere Internet Explorer, Mozilla Firefox na Chrome nchọgharị. Mgbe nkezi nke 5 - 30 sekọnd, ị nwere ike ịhụ faịlụ vidiyo nke mmemme VideoCacheView na ihuenyo isi.
Faịlụ akọwapụtara dị ka Ee na taabụ Nime cache bụ faịlụ enwere ike ilele ma ọ bụ echekwara. Kpọọ faịlụ ahọpụtara nelu aka ekpe iji lelee; Ka ịchekwaa, ị nwere ike iji nhọrọ Detuo ahọpụtara faịlụ ka nakụkụ.
Nha faịlụ: 0.10 MB